दायाँ शरीर-लगाएको क्यामेरा छनौट | OMG समाधानहरू
दायाँ शरीर-लगाएको क्यामेरा छनौट गर्दै
यो बजारमा उपलब्ध क्यामेराको व्यापक छनोटले सही एक पजलि। बनाउन सक्छ। ग्राहकले पहिले उनीहरूको आवश्यकताहरू के हो थाहा पाउनु पर्दछ। उदाहरण को लागी, कति रेकर्डि hours घन्टा को लाग्छ? कसरी तिनीहरू क्यामेरा लगाउन चाहन्छन् (उदाहरणका लागि हेलमेट वा काँध वा छाती मात्र), के तिनीहरूलाई लाइभ स्ट्रिमिंग वा रेकर्डि only मात्र आवश्यक छ, साधारण एक साइज-फिट-सबै प्रणाली बनाम मोड्युलर प्रणाली जसले अनुकूलनको लागि अनुमति दिन्छ (जस्तै, जडान गर्नुहोस्। बाह्य क्यामेरा), सुरक्षा लक्षणहरू जस्तै ईन्क्रिप्शन वा बिभिन्न प्राधिकरण स्तरहरू, VMS प्रणाली के प्रयोग गर्ने, आदि।
सबैभन्दा क्यामेरा पूर्व घटना रेकर्डिंग संग आउँछ र प्रयोगकर्ताले एक बटन धकेपछि रेकर्डिंग शुरू गर्दछ। अन्य व्यापक सुविधाहरू भिडियो ट्याग गर्दै छन् (छिटो पुन: प्राप्ति सक्षम गर्नको लागि), अन्य यन्त्रहरूमा भिडियो रेकर्डि of अवलोकन गर्न सजिलो गर्दै (जस्तै, पुलिस कार, कमाण्ड सेन्टर, ट्याबलेट, आदि)। अर्को प्रस्तावले 3G / 4G मार्फत भिडियो स्ट्रिम गर्दैछ कमाण्ड र नियन्त्रण स्तरमा स्थिति जागरूकता थप्नको लागि। हामी विश्वास गर्छौं कि यस उद्योगको भविष्य रेकर्डि and र प्रत्यक्ष स्ट्रिमि .को मिश्रणमा छ।
देखि बडी क्यामेरा भिडियो रेकर्डिंग अदालत ट्रायलको समयमा प्रुफको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, कम्पनीहरूले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि उनीहरूको उत्पादनहरूले डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि कानूनको बिभिन्न सेटको पालना गर्नु पर्छ। डाटा अखण्डता सुनिश्चित गर्न त्यहाँ धेरै साधारण सुविधाहरू छन्। बिभिन्न समर्थन स्तरले यो कुरा निश्चित गर्दछ कि क्यामेरा लगाएका पुलिस अफिसरसँग भिडियोमा हस्तक्षेप गर्ने, हटाउने वा परिवर्तन गर्ने कुनै तरिका छैन।
In उदाहरणका लागि Zepcam, हामीसँग तीन आधिकारिक स्तरहरू छन्: प्रयोगकर्ता स्तर (रेकर्डिंग र प्रत्यक्ष स्ट्रिमि allows मात्र अनुमति दिन्छ, तर कुनै फाइल मेटाउन वा रेकर्ड गरिएको फाईलमा प्रवेश), सुपरुजर (जसले रेकर्डि and र प्रत्यक्ष स्ट्रिमि allowsलाई अनुमति दिन्छ, साथ साथै फाइलहरू र पहुँच मेटाउनको लागि क्षमता) , रेकर्ड फाइलहरू), र प्रशासक स्तर, जसले सुपर-प्रयोगकर्ता स्तरको शीर्षमा प्रणाली प्रशासन सुविधाहरू affixes।
प्रकट ती भिडियो व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गरिएको रूपमा भिडियोहरूको ईन्क्रिप्शन प्रस्तुत गर्दछ। फाईलहरू केवल अधिकृत कम्प्युटरहरूमा मात्र हेर्न सकिन्छ र प्रयोगकर्ताहरू द्वारा मात्र उपयुक्त पासवर्डको साथ ईन्क्रिप्शन अनलक गर्न। प्रणालीले अपलोड गरेको बिन्दुबाट र यसको जीवनकालमा प्रणालीमा भएका प्रत्येक कार्य र घटनाहरूको समावेशी अडिट लग राख्दछ। अडिट लगले कार्यको समय / मिति, कार्यान्वयन गर्ने प्रयोगकर्ता, अधिनियम प्रदर्शन गरिएको कम्प्युटर, र कार्य आफैंको विवरण रेकर्ड गर्दछ। अतिरिक्त सुविधाले फाईलहरू लुकाउन क्षमता प्रदान गर्दछ, जुन उत्तरदायी सामग्री अपलोड गरिएको बेलामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। लुकेका फाइलहरू मात्र प्रशासकले परिभाषित गरेको अनुसार प्रयोगकर्ता स्तरहरूद्वारा मात्र हेर्न सकिन्छ। यसले पुलिस विभाग भित्र पनि सूचना सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ।
भिडियो रेकर्डि frequently बारम्बार यन्त्रमा भण्डारण हुन्छ र त्यसपछि शिफ्टको अन्तिम भागमा डकि station स्टेशनबाट अपलोड गरिन्छ - डकि station स्टेशनले अर्को पारीको लागि क्यामेरा पनि चार्ज गर्दछ। धेरै उत्पादक मोडेलहरूको लागि, अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूले स्थानीय भण्डारण र क्लाउड भण्डारणको बीचमा अप्ट इन गर्न सक्दछन्। विकल्पको पहुँचको बाबजुद पनि, हाम्रा अन्तर्वार्ताहरू सहमत भए कि प्रायः कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू उनीहरूको समाधान क्लाउडमा भण्डारण गरेर दर्दनाक छन्। हाम्रो ग्राहकहरूको बहुमत स्थानीय भण्डारण ओभरक्लाउड प्रयोग गर्दछ। क्लाउड भण्डारणको फाइदा यो हो कि फाईलहरू कुनै पनि स्थानबाट इन्टरनेटको साथ पहुँचयोग्य हुन्छन्; जे होस्, यो डाटा सुरक्षा को केही महत्वहीनता द्वारा एक नुकसान को रूप मा देख्न सकिन्छ।
केही देशहरू तिनीहरूको डाटालाई किनारमा डाटा केन्द्रहरूमा राखेर सहजै छैनन् र सही नीतिहरू छन् जुन यो अनुमति दिँदैन। त्यहाँ एक गलत दृष्टिकोण छ कि स्थानीय भण्डारणले क्लाउड भन्दा धेरै ध्यान र संरक्षणको माग गर्न सक्छ जब भिडियो डाटा को ठूलो खण्ड उत्पादन गर्दछ।
Vizucop को बार्नेसले थप चिन्ता थपे: पहिलो सम्झौता समाप्त भए पछि डाटालाई के हुन्छ? मानौं तपाईंसँग तीन बर्षे अनुबंध छ र यो समाप्त भएपछि तपाई सस्तो आपूर्तिकर्तालाई ठक्कर दिनुहुन्छ। के एजेन्सीहरू उनीहरूको भण्डार गरिएको जानकारी सार्न सक्षम हुनेछन्?
शरीर क्यामेरा र प्राप्य कोषहरु मा चासो मा तीव्र वृद्धि को बजार मा धेरै मोडेल ल्याएको छ। खरीददारहरू सचेत हुनुपर्दछ र उनीहरूले उच्च समर्थनका निर्माताहरू किन्नुहोस् कि उचित समर्थन प्रदान गर्न सक्नेछन्।
तपाईं क्यामेराको स्थिरतालाई हेर्नु आवश्यक छ, कम्पनी राम्रोसँग स्थापित छ वा यो त्यस्तो कोही हो जसले विदेशमा सस्तो स्रोत भेट्टायो जहाँ कुनै समर्थन छैन। यस उद्योगमा ग्राहक सेवा विशाल छ, कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई द्रुत उत्तर समय चाहिन्छ। त्यसोभए सस्तो क्यामेरा आपूर्तिकर्ताहरू बाहिर निस्किनेछन्, बिक्री पछि सेवाको लागतले साना प्लेयरहरूलाई हटाउनेछ।
के के तपाईले दिमागमा लगाउनु भएको क्यामेरा पाउँदा दिमागमा राख्नु पर्छ? एजेन्सीहरूले उपकरणबाट मोबाइल अनुप्रयोगहरू र क्याप्चरदेखि लिएर अदालतसम्म सम्पूर्ण प्रक्रियालाई महत्वपूर्ण दृश्यहरू रेकर्ड गर्ने, लाइसेन्स प्लेटहरू र अनुहारहरू जस्तो रिसेप्टिभ विवरणहरू पुनःभेट ​​गर्ने, केस साझेदारी गर्ने र प्रबन्ध गर्ने, र भिडियो रेकर्डिंग अदालतमा पेश गर्ने जस्ता सबै कुरा सम्झनु पर्छ। हामी ग्राहकहरूलाई केवल शरीरमा लगाउने क्यामेराको गुणवत्ता मात्र होइन तर प्रुफ मैनेजमेन्ट प्रणालीको गुणवत्ता पनि विचार गर्न प्रोत्साहन गर्दछौं जुन उनीहरूले स .्कलन गरेको डेटा राख्छन्।
धेरै आपतकालीन सेवाहरू अब शारीरिक Worn क्यामेरा खरीदको तेस्रो वा चौथो रन मा छन्। नयाँ आगमनले के सोच्नु पर्छ? हामी सुझाव दिन्छौं कि खरीददारहरूले आफैलाई सोध्नु पर्छ:
के शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू मागको लागि फिट छन्?
हामी कसरी भण्डारण प्रणालीमा संकलन गरिएका सबै भिडियो रेकर्डि ?हरू बदल्न सक्छौं?
हामी कसरी यी उपकरणहरू रिचार्ज गर्न सक्दछौं र के कुनै मर्मत आवश्यक छ?
हामी कसरी यो डाटा सफलतापूर्वक प्रबन्ध गर्न सक्छौं: स्थानीय वा क्लाउडमा?
प्रत्येक समाधानको कति रेट गर्छ र फाइदा र विपक्षहरू के हुन्?
शरीरमा परिणत क्यामेराको कति खर्च हुन्छ?
खराबी / बिच्छेदसँग सम्बन्धित वारेन्टीहरू के हुन्?
A खरीदको लागि श्रोभ दृष्टिकोण कमसेकम तीन विक्रेताहरू तपाईंको व्यवसायको लागि पिच गर्दै छन्, शरीरमा बृद्धि क्यामेरा समाधानका तीन मुख्य कम्पोनेन्टहरू अलग गर्दै: क्यामेरा उपकरण (फुटेजको गुणस्तर, कार्यक्षमता, ब्याट्री जीवन, शक्ति, प्रतिस्थापनको वारेन्टी, चार्ज) भण्डारण समाधान (के तपाइँ स्थानीय वा क्लाउड भण्डारण चाहनुहुन्छ? तपाइँ कसरी निश्चित भिडियो रेकर्डि forको लागि खोजी गर्नुहुन्छ? कति जना व्यक्ति फुटेजमा पुग्न सक्छन्? के यसले प्रमाण व्यवस्थापनको न्यायिक मापदण्डहरू पूरा गर्दछ? यदि तपाइँ आपूर्तिकर्ताहरू परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँको निकास योजना के हो? ?) र त्यसपछि मूल्य निर्धारण विकल्पहरूको पागल र बोल्टहरू (के यो स्पष्टसँग किनेको छ, वा मासिक सम्झौता? के हार्डवेयरको लागत भण्डारण रिजोलुसनको साथ समावेश छ?)।
Zepcam's van der Aa ले क्लाउड समाधान प्रयोगको सुझाव दिन्छ ताकि तपाईको संगठनमा आईटी स्थापना गर्नमा कुनै समस्या भएन - र पत्ता लगाउनुहोस् जहाँ तपाईको संगठनमा वास्तविक फाइदाहरू छन्। त्यसोभए, तपाईंले स्केलिंग अपको लागि योजना विकास गर्न सुरु गर्नुपर्छ।
तपाईं उनले पनि अगाडि बढ्नु पर्ने हुन सक्छ, उनी भन्छन्। के तपाईंको विक्रेता प्रदर्शन स्थान भविष्य-प्रमाण हो? के यसले थप क्यामेराहरू समात्न सक्छ? के यो भिडियो रेडिएसन वा एनालिटिक्सका लागि तयार छ? के यो अन्य प्रणालीहरूमा सँगै राख्न सकिन्छ? एउटा प्लेटफर्म हुनु महत्त्वपूर्ण छ जसमा लोच छ, उसले औंल्याउँछ।
र कसैलाई खोज्नुहोस् तपाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। पिन्सेकलको ह्वाइटली नोट: शरीरमा लगाइएको क्यामेरा अधिक व्यापक रूपमा स्वीकारिएको छ, सस्तो उत्पादनहरूको बाढी छ। जब तपाईं चश्मा को एक पुश संग एक उत्पादन देख्नुहुन्छ, वास्तविकता यो संभवतः त्यसो गर्दैन।
केही आधारभूत बिन्दुहरू तपाईंले आफ्नो दिमागमा राख्नुपर्दछ, तपाईं शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूमार्फत के प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? प्रक्रियामा जानु भन्दा पहिले धेरै ग्राहकहरु यसलाई मान्दैनन्। ग्राहकहरूसँग कुरा गर्नुहोस् जसले उत्पादन प्रयोग गर्छन् र अन्धामा नपार्नुहोस्।
मुख्य डोज के भन्ने सोच्नुहोस् र शरीरमा लगाउने क्यामेरा खरीदको काम गर्नुहुन्न।
कन्फर्मेसनको कूल प्रवाह र तपाईंले स collecting्कलन गर्नुहुने डाटालाई विचार गर्नुहोस् - तपाईंलाई यस्तो प्रणाली आवश्यक पर्दछ जुन यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ र सुनिश्चित गर्दछ कि प्रमाणको श्रृंखला सुरक्षित छ।
यसले यसको प्रशासन गर्छ र निश्चित गर्दछ कि प्रमाणको श्रृंखला सुरक्षित छ।
शरीरमा परिणत क्यामेरालाई ध्यान दिनुहोस् यदि तपाईं सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्न भने - यदि तपाइँका कर्मचारीहरू बारम्बार सर्तहरूमा हुन्छन् जहाँ यो अर्को व्यक्तिको बिरूद्ध एक व्यक्तिको शब्द हो, तिनीहरूले कानूनी बिललाई समर्थन गर्न सक्दछन् र खराब व्यवहारलाई रोक्न सक्छन्।
एक पायलट अध्ययन पूरा गर्न को लागी आफ्नो संगठन मा बॉडी-वर्न क्यामेरा रोल आउट गर्न को लागी लाभहरु र काम को लागी एक अनुभव प्राप्त गर्न।
भविष्यका बारे सोच्न नबिर्सनुहोस् - कसरी तपाईंको आवश्यकताहरू परिवर्तन हुन सक्छ र तपाईंले विचार गरिरहनु भएको प्रणाली तिनीहरूलाई लोभ्याउन पर्याप्त लचिलो हुनेछ कि भनेर विचार गर्नुहोस्।
डट गरिएको लाइनमा साइन इन नगर्नुहोस् बिना सोच्नुहोस् कि तपाईं सहि विक्रेतामा लक हुनुहुनेछ।
At हाम्रो बहसको अन्त्यमा, हामी टोरन्टो पुलिसका माइकल बारस्की कार्यवाहक अधीक्षकबाट अवलोकन गरिरहेका छौं। उसले सुझाव दिन्छ कि तपाईको वरपरको लागि सहि शरीरमा लगाउने क्यामेरा समाधान छनौट गर्नको लागि, तपाईंले पहिले तपाईंले उपकरणको उपयोग गर्न लाग्नु भएको कुराको लेनदेन गर्नुपर्दछ। एक पटक तपाईले आफ्नो वातावरणमा उपकरणको कारण निर्णय गर्नु भए पछि तपाईले ती अधिकारिहरुसँग मानवीय अधिकार, गोपनीयता र जानकारी स्वतन्त्रता, उपयुक्त युनियनहरु र वकिल वकीलहरुलाई भेट्नु पर्छ। यी कुञ्जी खेलाडीहरूले तपाइँको काम सूचित गर्दछ, र तपाइँको चासो र आवश्यकताहरु मा आसन्न प्रदान गरेर, सही समाधान गर्न तपाइँलाई मार्गदर्शन गर्नेछ।
तपाईंको टोलीले त्यसपछि क्यामेरा, सफ्टवेयर, कन्फेसन प्रक्रियाहरू, र भण्डारण सहित टेक्नोलोजीको लागि तपाईंसँग विश्वास गर्न आवश्यक अनिवार्य आवश्यकताहरू तोक्नुपर्दछ। त्यसो भए, र त्यसपछि मात्र तपाईलाई सस्तो लागतमा तपाईको आवश्यकताका लागि वैध समाधान छ कि भनेर निर्धारित गर्न ठीकसँग राखिन्छ।
दायाँ शरीर-लगाएको क्यामेरा छनौट गर्दै पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: अक्टोबर 9th, 2019 by व्यवस्थापक
3435 कुल दृश्यहरू 1 हेराइ आज